Casting vacuum | Fanariana Urethane | Fizarana prototype plastika - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
CreateProto, eo an-tsoratry ny teknolojia fanariana fantsona, dia afaka mamorona bobongolo vita amin'ny silipo vita amin'ny silety mamokatra tapany urethane haingana sy marina. Cast urethane amin'ny alàlan'ity fizotrany ity dia mety mba hizaha toetra ireo faritra nialoha ny famokarana, ny fiasa ary ny fanamarinana ny endrika.
Safidy famokarana fohy haingana: Prototypes plastika kely
Ny teknolojia fanariana fantsom-batana an'ny CreativeProto dia manolotra fitaovana maro isan-karazany hanamorana ny famoronana ampahany urethane cast, mazàna ho an'ny fitsapana miasa, fanombanana mialoha ny famokarana ary famokarana ambany. Ny faritra urethane dia malaky sy lafo vidy fa tsy mila manambola fitaovana vita amin'ny vy raha toa ka amboara fohy am-polony fotsiny ny habetsahana, ary azo atolotra mandritra ny herinandro maromaro amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Ny fanariana vacuum (fantatra koa amin'ny anarana hoe casting polyurethane) dia azo ampiasaina hanaraha-maso akaiky ireo ampahany vita amin'ny tsindrona farany na vokatra vita. Amin'ny ankapobeny, ny bobongolo dia vita amin'ny silipo silipo ary mampiasa ampahany CNC na SLA ho modely maoderina. Ireo bobongolo ireo dia mamerina antsipiriany sy firafitra ary manome famaranana tsy miova avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny manaraka. Azonao atao ny mahazo valiny toy ny famokarana ao anatin'izany ny toetra mekanika, loko ary famaranana.
Miaraka amin'ny traikefa niainan'ny 20 taona, ny ekipa manampahaizana manokana an'i Createproto dia manome serivisy fanariana fantsona tena tsara ho an'ny prototypes plastika ambany, ary manampy anao hikapoka ny fifandanjana mety eo amin'ny faritra avo lenta sy fampiasa farany ary ny fotoana famokarana. Mitadiava fampahalalana misimisy kokoa momba ny fizotran'ny fanariana vakumay, azonao atao ny mangataka teny nindramina etsy.
Manamboatra Pattens Master ho an'ny Casting Urethane
Ny kalitaon'ny ampahany fanariana dia voafaritry ny kalitaon'ny maodelin'ny maodely, ary ny ankamaroan'ny mazdazy iraisana dia ampiasain'ny CNC rehefa mila mitazona fandeferana mafy toy ny +/- 0.05mm. Ho fanampin'izany, hodinihintsika ihany koa ny fanaovana ny tompony amin'ny alàlan'ny SLA ho an'ireo faritra misy rafitra sarotra. Ny milina CNC dia mitaky fotoana lava kokoa ary mandany vola bebe kokoa hanaovana ny tompony, raha ny SLA kosa dia afaka mamokatra haingana ireo tompo, ary afaka miantoka ny fiakaran'ny volavolan-dalàna hiforona tsara sy marina.
Ny habetsaky ny tompo dia mifototra amin'ny habetsaky ny ampahany fanariana takiana amin'ny farany. Raha sombin-javatra vitsivitsy fotsiny ny fantsom-pandefasana, dia ho ampy ny tompony iray, raha toa ka mihoatra ny 30 ny habetsany, amin'ny fandinihana ny ora fanaterana dia hanao tompo 1-2 izahay mba hahafahantsika manamboatra bobongolo silika bebe kokoa hanaovana ireo faritra fanariana Haingankaingana.
Rehefa tonga amin'ny fandeferana avo lenta ny famaranana ny mpanjifa, ny famaranana manjelanjelatra na ny faritra mazava tsara aza, ny maodely maoderina dia hamboarina miaraka amin'ny masinina CNC izay miavaka amin'ny famaritana mazava tsara sy ny famitana farany ambony kalitao.
Ireo ampahany voadio ho matihanina dia ho famaranana manjelanjelatra sy fahazavana mazava amin'ny optika. Mandritra izany fotoana izany, azontsika atao ihany koa ny mandoko faritra amboniny ho an'ny firafitra na satin vokany hanamboarana ny farany lasitra firafitry ny vokatra. Ny bobongolo vita amin'ny silika dia handika ny pitsopitsony sy ny endriny avy amin'ny tompony tany am-boalohany, ka ny ampahany amin'ny fanariana dia hivoaka mitovy amin'ny tompony nefa tsy misy famaranana fanampiny eto ambonin'ny.
Famboarana bobongolo vita amin'ny silipo
Ny bobongolo vita amin'ny silipo vita amin'ny silika (fantatra koa amin'ny hoe lasitra RTV) dia noforonina miorina amin'ny lamina maoderina. Ny fahamarinan-toerana ara-simika, ny fananana mamoaka tena ary ny manalefaka ny silipo vita amin'ny silipo dia tsara indrindra satria manome fihenam-bidy kely ary mitondra antsipiriany tsara avy amin'ny tompony mankany amin'ny bobongolo.
Ny androm-piainan'ny lasitra silika dia mifandray mivantana amin'ny fahasarotan'ilay ampahany fanariana. Amin'ny ankapobeny dia mamoaka tapa-12-15 alohan'ny fahasimbana. Raha tsotra ny firafitry ny ampahany, ny lasitra iray dia mety afaka mandefa faritra 20; raha toa ka mila kalitao avo lenta toy ny ampahany sarotra ny ampahany, ny bobongolo iray dia tsy afaka manamboatra ampahany 12 na 10 akory aza.
Dingana amin'ny famoronana lasitra vita amin'ny silika vita amin'ny silika
Mila miraikitra amin'ny sarimihetsika manify ny tompo mba hanamorana ny famotehana ny bobongolo, izay ho toy ny zaitra ho an'ny lasitra farany.
Ny maodely maoderina dia mihantona ao anaty boaty iray misy vavahady sy vavahady mihidy; apetraka eo amin'ilay ampahany ny riser mba hivoahan'ny rivotra amin'ny lasitra farany.
Narotsaka manodidina ny tompony ny silika ary ny banga dia ampiasaina hanalana ny rivotra rehetra. Io dia sitrana amin'ny lafaoro, amin'ny hafanana 40 ℃. Amin'ny ankapobeny dia maharitra 8-16 ora arakaraka ny habetsaky ny bobongolo.
Raha vao sitrana ny silika vita amin'ny silika dia esorina ny boaty sy ny riser; satria ny tompony dia esorina amin'ny silika mba hamorona lava-kazo dia vitaina ny lasitra vita amin'ny silika vita amin'ny silipo.
Antsipirian'ny fizotran'ny fanodinana polyurethane
Ny fandefasana polyurethane dia afaka mifanandrify tsara amin'ny famaritan'ny mpanjifa, tsy maninona ny lokony, ny volony ary ny famaranana manjelanjelatra, ampidiro ary amboarina, na mazava tsara aza.
Ny fomba fiasa mifototra amin'ny CreateProto dia manome toky fa ny famerenana ampahany marina sy ny toetra mekanika tsy miova. Ny teknisiana fanariana anay dia mifehy ny masontsivana miasa rehetra: mifangaro, manapoka, manetsiketsika, manafana, manaparitaka ary manaparitaka, mamela ny kopian'ny maodely efa akaiky indrindra hamoronana, ary manome fandeferana mahazatra amin'ny ± 0.15mm / 100mm, miaraka amin'ny refy avo indrindra afaka hahatratra ± 0,05 mm.
Dingana mankany amin'ny fizotry ny fanariana Urethane
Fiomanana amin'ny dingana voalohany, apetraka ao anaty lafaoro ny lasitra silika ary hafanaina hatramin'ny 60 ° C-70 ° C.
Angony ny bobongolo alohan'ny fanariana ny polyurethane. Ny fisafidianana ny mpamatsy famoahana bobongolo marina (ary ny fampiasana azy tsara) dia tena zava-dehibe tokoa hisorohana ny tsy fahampian-tsofina sy ny tsy fetezana eo amboniny.
Omano ny resin polyurethane hanafanana azy manodidina ny 40 ° C alohan'ny hampiasana azy. Afangaroy ny resina misy singa roa ao anaty refy, ary avy eo afangaro tanteraka sy degas mandritra ny 50-60 segondra eo ambanin'ilay banga.
Ny resina dia araraka ao anaty lasitra ao anaty efitrano fantsom-bokatra eo ambanin'ny fibaikoan'ny solosaina ary sitrana indray ao anaty lafaoro. Fotoana fanasitranana antonony: 1-3 ora ho an'ny faritra kely ary 3-6 ora ho an'ny faritra lehibe.
Esory ny ampahany resin avy amin'ny lasitra silika rehefa sitrana. Esory ny vavahady sy ny vavahady; avelao ny kopian'ny marina.
Miomàna hamerina ity tsingerina ity.
Mamorona ampahany Urethane Cast miaraka amina karazan-java-java-boahiry resina
Ny resetana urethane dia polymera manana fananana, tanjaka ary fampiasana isan-karazany. Ny urethanes dia mety ho henjana, elastomerika, miloko, mazava, voaloko ary mifono. Ireo fitaovana dia novolavolaina indrindra mba hanahafana ireo plastika famokarana mahazatra.
CreateProto dia manolotra fitaovana isan-karazany hihaonana amin'ny fampiharana anao, ao anatin'izany ny Hei-Cast avy any Japon sy Axson avy any Frantsa. Ireo fitaovana misy fananana sasany dia mitovy amin'ny plastika famokarana injeniera, toy ny ABS, PMMA, PC, PP, PA, sns. Ny ampahany amin'ny fanariana dia azo miovaova amin'ny mangarahara, azo zahana amin'ny loko ary avy amin'ny fingotra malefaka ka hatramin'ny plastika mafy. Ny fitaovana isan-karazany dia misy ireo fanoherana azo antoka, hafanana avo lenta (120 ℃) ​​na mahatohitra afo (UL94-V0), ary resina feno vera ary silônaly henjana samihafa.
Ny fahafahan'ny cast urethane dia tsy misy farany, ary manaporofo izany fa vahaolana ambany ambany tanteraka.
Fampiharana fanariana fako polyurethane
Famokarana volume ambany / famokarana fohy
Ny fanariana banga dia tonga lafatra amin'ny prototypes plastika avo lenta. Rehefa tsy manamarina ny fampiasam-bola amin'ny famolavolana tsindrona sy ny faritra famokarana fohy ny volavolan-dalàna, dia afaka mamita herinandro maromaro alohan'ny fahavononan'ny fitaovana famokarana. Ny serivisy fanamboarana mandroso dia manampy anao mamorona ampahany amin'ny famokarana fanao mahazatra sy sarotra amin'ny isa ambany kokoa noho ny fitaovana nentim-paharazana sy ny famolavolana.
Fanamarinana injeniera / fanandramana miasa
Ny fizotran'ny fanariana urethane sy ny fitaovana tsy dia lafo loatra dia manamora sy manankarena ny fanovana injeniera ilaina sy ny fanovana endrika. Ho fanampin'izany, ireo dia hampiasaina hanaovana fitsapana miasa alohan'ny fitsapana ny vokatra famokarana betsaka ary hamoahana ny tatitra na koa hahazoana fankatoavana fanamarinana.
Modely momba ny estetika / fandalinana loko sy firafitra
Ny ampahany manaparitaka dia mety ho modely hatsarana feno miaraka amin'ny loko, firafitra ary famaranana samy hafa eo ambanin'ny hevitra famolavolana mitovy. Raha tsy fantatrao ny loko mety ho mety indrindra amin'ny vokatra iray, dia azonao atao ny manamboatra lasitra silika hamokarana sary miisa 10-15 ary mandoko tsirairay miaraka amin'ny loko sy ny firafitra misy anao hiresahana anatiny mandritra ny fivoriana eo amin'ireo sampana famolavolana na koa ny fivorian'ny fitantanana.
Modely Vonona / Aseho Marketing
Ny fampiasa amin'ny mpampiasa farany sy ny famaranana avo lenta dia mahatonga ny fizarana urethane mety ho an'ny fitsapana ny mpanjifa sy ny fanombanan'ny mpampiasa. Ny fampiharana ny fizotran'ny urethane cast dia midika fa ny fanovana dia azo atao haingana na amin'ny fanandramana bebe kokoa na amin'ny fanombohana tsena. Amin'ny fampirantiana na fampirantiana dia azonao atao ny mampiseho sanganasa maodely marobe amin'ireo mpanjifa liana. Ilaina koa ny famolavolana urethane amin'ny sary amin'ny fanomanana ny brochure an'ny orinasa na alefa amin'ny tranokala ofisialy amin'ireo mpanjifa mety ho tonga.
Cnc Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana sy famokarana,